Wobesi Dɛn Enyan Ewufo? | Ɔweɔn-Aban Adzesua
KENKAN WƆ Abua Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur America Mmum Kasa Amharic Amis Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Assamese Aukan Australia Mmum Kasa Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bolivia Mmum Kasa Boulou Brazil Mmum Kasa Britain Mmum Kasa Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chiga Chile Mmum Kasa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Mmum Kasa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombia Mmum Kasa Costa Rica Mmum Kasa Croatia Mmum Kasa Croatian Cuba Mmum Kasa Czech Czech Mmum Kasa Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Ecuador Mmum Kasa Edo Efik El Salvador Mmum Kasa English (Borɔfo) Esan Estonian Ewe (Awona) Fijian Finland Mmum Kasa Finnish Fon French French Mmum Kasa Ga (Nkran Kasa) Garifuna Georgian German German Mmum Kasa Gitonga Gokana Greek Greek Mmum Kasa Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guatemala Mmum Kasa Guianese Creole Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Mmum Kasa Hungarian Hungary Mmum Kasa Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Idoma Igbo Igede Iloko India Mmum Kasa Indonesia Mmum Kasa Indonesian Isoko Italian Italy Mmum Kasa Ivory Coast Mmum Kasa Japan Mmum Kasa Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kenya Mmum Kasa Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kituba Kongo Konkani (Roman) Korea Mmum Kasa Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Lari Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Mmum Kasa Makhuwa-Meetto Malagasy Malawi Mmum Kasa Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Mapudungun Marathi Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexico Mmum Kasa Mfantse Min Nan (Taiwan) Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nicaragua Mmum Kasa Nigeria Mmum Kasa Niuean Norwegian Nsenga Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Panama Mmum Kasa Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguay Mmum Kasa Persian Peru Mmum Kasa Philippines Mmum Kasa Pidgin (West Africa) Poland Mmum Kasa Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Mmum Kasa Punjabi Quebec Mmum Kasa Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romania Mmum Kasa Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russia Mmum Kasa Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovakia Mmum Kasa Slovenian Solomon Islands Pidgin Songomeno South Africa Mmum Kasa Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Sweden Mmum Kasa Swedish Tagalog Tahitian Taiwan Mmum Kasa Tajiki Talian Tamil Tamil (Roman) Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Tewe Thai Thailand Mmum Kasa Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuela Mmum Kasa Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba (Alata) Zambia Mmum Kasa Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Mmum Kasa Zulu
ADZESUA ASƐM 50
“Owu, wo konyim wɔ hen? Owu, wo hwirom wɔ hen?”—1 COR. 15:55.
NDWOM 141 Nkwa Yɛ Anwanwadze
1-2. Ebɛnadze ntsi na ɔsɛ dɛ hɔn a wobenyan hɔn akɔ sor no ho asɛm hia Christianfo nyinara?
JEHOVAH n’asomfo a wɔwɔ hɔ ndɛ no mu piinara wɔ enyidado dɛ wɔbɛtsena asaase yi do daa. Naaso, Christianfo a wɔdze sunsum asera hɔn a wɔaka wɔ asaase yi do no wɔ enyidado dɛ wobenyan hɔn ma wɔaakɛtsena sor. Hɔn a wɔasera hɔn yi pɛ dɛ wohu mbrɛ hɔn asetsena bɛyɛ wɔ sor. Naaso, ebɛnadze ntsi na ɔsɛ dɛ hɔn a wɔwɔ enyidado dɛ wɔbɛtsena asaase yi do no sũa dɛm ɔsor enyidado yi ho adze? Dɛ mbrɛ yebohu wɔ adzesua yi mu no, hɔn a wobenya owusoɛr akɔ sor no dze nhyira bɛbrɛ hɔn a wɔwɔ enyidado dɛ wɔbɛtsena asaase yi do daa no. Ntsi, ɔmmfa ho dɛ yɛwɔ enyidado dɛ yɛbɛtsena sor anaa yɛbɛtsena asaase yi do no, ɔsɛ dɛ yɛma hɔn a wobenyan hɔn akɔ sor no ho asɛm hia hɛn.
2 Nyankopɔn dze no sunsum kaa Jesus n’esuafo binom a nna wɔwɔ tsetse Christianfo no aber do no ma wɔkyerɛɛw ɔsor enyidado no ho asɛm. Ɔsomafo John kyerɛkyerɛɛ mu dɛ: “Afei yɛyɛ Nyankopɔn mba, na mbrɛ yɛbɛyɛ no nnyae nndaa edzi, na yenyim dɛ, sɛ oyi noho edzi a, yɛbɛyɛ dɛ ɔno.” (1 John 3:2) Dɛm ntsi Christianfo a wɔasera hɔn no nnyim mbrɛ hɔn asetsena bɛyɛ daakye ber a woenyan hɔn ama hɔn sunsum nyimpadua ma wɔkɔ sor no. Naaso, sɛ wonya hɔn akatua no a wobohu Jehovah. Hɔn a wobenyan hɔn akɔ sor no, Bible no nnkã hɔnho nsɛm nyinara nnkyerɛ hɛn, naaso ɔsomafo Paul kãa nsɛm bi a ɔfa hɔnho. Hɔn a wɔasera hɔn no bɛka Christ ho ber a ɔbɛma “mpanyindzi nye tumdzi nye ahoɔdzen nyina ayɛ kwa” no. “Ɔtamfo a odzi ekyir” a ɔnye owu so ka ndzɛmba a wɔbɛma ayɛ kwa no ho. Ewiei koraa no, Jesus nye hɔn a wɔnye no bɔbɔ mu edzi adze no dze hɔnho nye ndzɛmba nyina bɛhyɛ Jehovah n’ase. (1 Cor. 15:24-28) Dɛm aber no bɛyɛ enyigye ber ankasa! *
3. Dɛ mbrɛ 1 Corinthfo 15:30-32 kyerɛ no, ebɛnadze na gyedzi a nna Paul wɔ wɔ owusoɛr no mu no boaa no ma ɔyɛe?
3 Gyedzi a nna Paul wɔ wɔ owusoɛr no mu no boaa no ma ogyinaa nsɔhwɛ ahorow a ohyiae no ano. (Kenkan 1 Corinthfo 15:30-32.) Ɔkãa kyerɛɛ Corinthfo no dɛ: “Muwu daa.” Ɔsanee kyerɛɛw dɛ: “Menye mbowa kõe wɔ Ephesus.” Obotum aba dɛ nna ɔrekã mbowa ankasa a ɔnye hɔn kõe wɔ Ephesus agoprama do ho asɛm. (2 Cor. 1:8; 4:10; 11:23) Anaa obotum aba dɛ, nna ɔrekã Jewfo a wɔsoɛree tsiaa no nye afofor a nna wɔyɛ hɔn adze tse dɛ “mbowa” no ho asɛm. (Andw. 19:26-34; 1 Cor. 16:9) Mbrɛ nna ɔtse biara no, Paul hyiaa tsebea a no mu yɛ dzen. Naaso, ɔkɔr do nyaa gyedzi dɛ daakye papabi da hɔ rotweɔn no.​—2 Cor. 4:16-18.
Ebusua bi a wɔtse ɔman bi a wɔabra hɛn som edwuma no mu da ho ara dze akokodur rosom, osiandɛ wɔwɔ gyedzi a no mu yɛ dzen wɔ Nyankopɔn mu dɛ obehyira hɔn pii daakye (Hwɛ nkyekyɛmu 4)
4. Ebɛn kwan do na owusoɛr ho enyidado no hyɛ Christianfo dzen ndɛ? (Hwɛ mfonyin a ɔwɔ Ɔweɔn-Aban yi enyim no.)
4 Mber a yɛtse mu yi yɛ hũ. Hɛn nuanom binom wɔ hɔ a nkorɔfo dzi hɔn bɔn. Afofor so tsetse mbea a akodzi rokɔ do na wonnyi bambɔ biara. Bio so, wɔ aman bi do no, Jehovah no nkorɔfo nnyi fahodzi a wɔdze kã asɛmpa no, naaso wɔkɔ do som no ɔmmfa ho dɛ iyi botum ama wɔdze hɔn eegu efiadze anaa woeekũ hɔn mpo no. Naaso, dɛm enuanom yi nyina kɔ do som Jehovah, na dza wɔyɛ no yɛ nhwɛdo pa ma hɛn. Dɛm enuanom yi mmbɔ hũ osiandɛ wonyim dɛ sɛ wɔhwer hɔn nkwa ndɛ mpo a, Jehovah wɔ biribi papabi ma hɔn daakye.
5. Ebɛn adwen a ɔyɛ hũ na obotum ama gyedzi a yɛwɔ wɔ owusoɛr no mu no abrɛ adze?
5 Paul bɔɔ no nuanom no kɔkɔ wɔ adwen a ɔyɛ hũ a nna nyimpa binom kura no ho. Ɔkãa dɛm adwen no ho asɛm dɛ: “Na sɛ ewufo nnyan a, hom mma yendzidzi na yɛnnom, na ɔkyena na yeewu.” Nna nnyɛ Paul n’aber do nko na nkorɔfo wɔ adwen a ɔtse dɛm, nna adwen a ɔtse dɛm no wɔ hɔ dada. Obotum aba dɛ nna ɔrekã asɛm a ɔwɔ Isaiah 22:13 a ɔfa adwen a nna Israelfo no wɔ no ho. Dɛ nkyɛ wɔbɛyɛ ndzɛmba a ɔbɛma wɔatwe abɛn Nyankopɔn no, wokedzii enyigyedze mbom ekyir. Nna adwen a Israelfo no wɔ ara nye dɛ, “hom mma yɛngye hɛn enyi ndɛ, na ɔkyena na yennyi hɔ.” Dɛm adwen no ara na ndɛ so nyimpa pii wɔ. Naaso, adwen a ɔnntsen yi a nna Israelfo no wɔ no, Bible no ma yehu nsunsuando bɔn a ofii mu bae no.​—2 Mber. 36:15-20.
6. Ebɛn kwan do na ɔsɛ dɛ owusoɛr ho enyidado no ka hɛn anyɛnkofa?
6 Ɔda edzi kofee dɛ, ɔsɛ dɛ nokwasɛm a ɔnye dɛ Jehovah botum enyan ewufo no ka hɛn ma yehu nyimpa a ɔsɛ dɛ yɛfa hɔn nyɛnko. Nna ɔsɛ dɛ enuanom a wɔwɔ Corinth no hwɛ hɔnho yie wɔ hɔn a wɔnngye owusoɛr no nndzi a wɔnye hɔn bɛfa nyɛnko no ho. Esuadze a ɔwɔ mu ma hɛn ndɛ nye dɛ: Sɛ yɛnye hɔn a wɔnndwen dza obesi daakye ho na mbom wodzi enyigyedze ekyir no bɔ fɛkuw pii a, wobotum enya nkantando bɔn wɔ hɛn do. Sɛ nokwar Christiannyi bi nye hɔn a wɔtse dɛm no bɔ fɛkuw pii a, wobotum asɛɛ no nsusui na ne ndzeyɛɛ. Mbrɛ ɔtse nye dɛ, fɛkuw a ɔtse dɛm no botum ama ɔaabɔ bra a Nyankopɔn kyir. Dɛm ntsi, Paul tuu hɔn fo enyiber do dɛ: “Hom ntsew hom enyi tsenenee mu, na mma hom nnyɛ bɔn.”​—1 Cor. 15:33, 34.
EBƐN NYIMPADUA NA HƆN A WOBENYAN HƆN NO BENYA?
7. Dɛ mbrɛ 1 Corinthfo 15:35-38 kyerɛ no, ebɛn asɛm na bi a binom bisae faa owusoɛr no ho?
7 Kenkan 1 Corinthfo 15:35-38. Obi a nna ɔmmpɛ dɛ afofor gye owusoɛr no dzi no, bi a obisaa dɛ: “Ewufo dua dɛn nyan?” Oye papaapa dɛ yebosusu mbuae a Paul dze mae no ho, osiandɛ ndɛ ɔsor adwen a nyimpa pii wɔ wɔ dza osi wɔ obi no wu ekyir no ho. Naaso, ebɛnadze na Bible no kyerɛkyerɛ?
Paul dze aba na dua yɛɛ mfatoho dze kyerɛɛ dɛ Nyankopɔn botum ama hɔn a obenyan hɔn no nyimpadua a ɔfata (Hwɛ nkyekyɛmu 8)
8. Ebɛn mfatoho na ɔbɔboa hɛn ma yaatse hɔn a wobenya owusoɛr akɔ sor no asɛm no ase?
8 Sɛ obi wu a, ne nyimpadua no prɔw. Naaso, Nyia ɔammfa hwee ammbɔ amansan no botum enyan dɛm nyimpa no na ɔaama no nyimpadua a ɔfata. (Gen. 1:1; 2:7) Paul yɛɛ mfatoho bi dze kyerɛɛ dɛ, sɛ Nyankopɔn rinyan obi a, no ho rinnhia dɛ ɔbɛma ɔdze nyimpadua kor no ara asan aba. Hom mma yensusu “burofua,” anaa “aba” ho nhwɛ. Sɛ yedua aba bi a, ofifir dɛ dua fofor. Dua fofor a oefifir no yɛ soronko kakra fi aba a yeduae no ho. Paul yɛɛ dɛm ntotoho yi dze kyerɛɛ dɛ hɛn Bɔfo no botum ama obi a oenyan no no ‘dua [nyimpadua] kor a ɔpɛ.’
9. Ebɛn asɛm na 1 Corinthfo 15:39-41 kã fa abɔdze ahorow a wɔwɔ hɔ no ho?
9 Kenkan 1 Corinthfo 15:39-41. Paul kãa dɛ abɔdze gu ahorow pii. Dɛ nhwɛdo no, yɛwɔ abɔdze ahorow a wɔwɔ honam, ibi nye nantwi, nnoma nye esunam. Ɔkãa dɛ sɛ yɛhwɛ sor a, yehu nsonsonee a ɔda ewia nye bosoom ntamu. Bio so, ɔkyerɛɛw dɛ “ɔsosor nworaba enyimnyam nkorkor.” Sɛ yenntum mmfa hɛn enyiwa nnhu dɛm nsonsonee yi mpo a, dɛm asɛm yi yɛ nokwar. Abɔdzenyansahufo kã dɛ nworaba ahorow pii na wɔwɔ hɔ, ibi yɛ akɛse, ibi yɛ nkakraba, ibi yɛ kɔkɔɔ, ibi yɛ fitaa, na ibi yɛ akokɔangoa tse dɛ ewia no. Paul sanee kãa dɛ “sor abɔdze so wɔ hɔ, na famu abɔdze wɔ hɔ.” Nna ɔrepɛ akyerɛ dɛn? Dza ɔtse nye dɛ, wɔ asaase yi do no yɛwɔ honam abɔdze, naaso wɔ sor dze sunsum abɔdze na wɔwɔ hɔ, tse dɛ abɔfo no.
10. Ebɛn nyimpadua na hɔn a wobenyan hɔn akɔ sor no benya?
10 Hyɛ asɛm a odzi hɔ a Paul kãe yi nsew. Ɔkãa dɛ: “Mbrɛ ewufo mu soɛr so tse nye no. Wodua no prɔwee mu: wonyan no dza ɔmmprɔw.” Nokwasɛm nye dɛ, sɛ obi wu a, ne nyimpadua no prɔw na ɔsan kɔ dɛtse mu. (Gen. 3:19) Ntsi wobesi dɛn enyan nyimpadua no wɔ “dza ɔmmprɔw” mu? Nna Paul rennkã obi a woenyan no aba asaase do tse dɛ nyimpa binom a Elijah, Elisha, nye Jesus nyaan hɔn no ho asɛm. Nna Paul rekã obi a woenyan no a wɔama no nyimpadua a obotum atsena sor, kyerɛ “sunsum dze.”​—1 Cor. 15:42-44.
11-12. Aber a wonyaan Jesus no, ebɛn nyimpadua na wɔdze maa no? Ebɛn kwan do na hɔn a wɔasera hɔn no so benya nyimpadua a ɔtse dɛmara?
11 Aber a Jesus wɔ asaase do no, nna ɔwɔ honam nyimpadua. Naaso aber a wonyaan no fii owu mu no, ‘ɔbɛyɛɛ sunsum a ɔma nkwa’ na ɔsanee kɔr sor. Dɛmara na Christianfo a wɔasera hɔn no so, sɛ wonyan hɔn a wɔma hɔn sunsum nyimpadua ama woeetum atsena sor. Paul kyerɛkyerɛɛ mu dɛ: “Mbrɛ yɛahyɛ famunyi no suban no, mbrɛ so yɛbɛhyɛ ɔsornyi no suban nye no.”​—1 Cor. 15:45-49.
12 Nna Paul dze ne nkyerɛkyerɛmu a ɔfa owusoɛr ho no reba ewiei. No ho hia dɛ yɛhyɛ no nsew dɛ, woennyan Jesus dɛ honam abɔdze. Paul kãa asɛm no ma no mu daa hɔ. Ɔkãa dɛ: “Honam nye bɔgya nntum nnya Nyankopɔn ahenman no” wɔ sor. (1 Cor. 15: 50) Asomafo no nye afofor a nna wɔasera hɔn no, sɛ nna wonyan hɔn a wɔremmfa honam nye bɔgya nyimpadua a ɔsɛɛ no nnkɔ sor. Nna ebɛn aber na wobenyan hɔn? Paul kãa dɛ, nnyɛ aber a wowui no ara na wobenyan hɔn, mbom no nna hɔn wusoɛr no bɛba daakye. Aber a Paul kyerɛɛw Corinthfo nwoma a odzi kan no, nna esuafo no mu “binom adeda” wɔ owu mu; nna ɔsomafo James ka ho. (Andw. 12:1, 2) Ekyir yi, nna asomafo afofor nye hɔn a wɔasera hɔn no mu binom so ‘bɛdeda’ wɔ owu mu.​—1 Cor. 15:6.
OWU DO KONYIMDZI
13. Ebɛn nsɛm na obesisi wɔ Jesus ne mbae no mu?
13 Jesus nye Paul nyinara kãa ber tsitsir bi a ɔbɛba ho asɛm. Dɛm aber no nye Christ ne mbae no. Nna akokoeko, asaasewosow, ɔyardɔm nye ndzɛmba bɔn pii a obesisi wɔ wiadze nyina no bɛyɛ Christ ne mbae no ho asɛnkyerɛdze. Ofitsi afe 1914 reba no, yeehu dɛm Bible nkɔnhyɛ yi ne mbamu. Afei so, nna yebohu Christ ne mbae no ho asɛnkyerɛdze ne fã tsitsir bi so. Jesus kãa dɛ wɔbɛkã Nyankopɔn n’Ahendzi a ɔdze esi hɔ no ho asɛmpa “wɔ wiadze nyina dze edzi amanaman nyina dase; na nkyii ewiei no bɛba.” (Matt. 24:3, 7-14) Paul kãa dɛ “Ewuradze ne ba” no mu ara so na wobenyan Christianfo a wɔasera hɔn a ‘wɔadeda’ wɔ owu mu no.​—1 Thess. 4:14-16; 1 Cor. 15:23.
14. Sɛ hɔn a wɔasera hɔn no bi wu wɔ Christ ne mbae no mu a, ebɛn asɛm na osi?
14 Ndɛ, sɛ hɔn a wɔasera hɔn no mu bi wu a, wonyan no amonmu hɔ ara ma ɔkɔ sor. Iyi da edzi wɔ Paul n’asɛm a wɔayɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ 1 Corinthfo 15:51, 52 no. Ɔkãa dɛ: “Nnyɛ hɛn nyina na yɛbɛdeda [wɔ owu mu], na wɔbɛsakyer hɛn nyina, amonmu ara, enyi rubu, wɔ ekyir abɛntoa no mu.” Paul ne nsɛm yi rinya ne mbamu ndɛ! Sɛ wonyan Christ no nuanom yi a, wobenya enyigye a odzi mũ; “wɔnye Ewuradze bɛtsena daa.”​—1 Thess. 4:17.
Hɔn a wɔsesa hɔn wɔ ‘enyibu’ mu no bɛka Jesus ho ma wɔaasɛɛ amanaman no (Hwɛ nkyekyɛmu 15)
15. Ebɛn edwuma na hɔn a wɔbɛsesa hɔn wɔ ‘enyibu’ mu no bɛyɛ?
15 Bible no kã edwuma a hɔn a wɔbɛsesa hɔn wɔ ‘enyibu’ mu no bɛyɛ wɔ sor. Jesus kã kyerɛ hɔn dɛ: “Nyia obedzi nyim na oekura mo ndwuma mu ekesi ase no, mebɛma no amanaman do tum: na ɔdze dadze poma bɔhwɛ hɔn do, na obobubu hɔn posoposo dɛ ɔwemfo nsenaba; dɛ mbrɛ mo so menya no m’Egya nsamu” no. (Nyi. 2:26, 27) Wobedzi hɔn Sahen no n’ekyir na woeedzi dwuma a ɔhyɛ hɔn nsa no, ɔnye dɛ wɔdze dadze poma bɔhwɛ amanaman no, kyerɛ dɛ, wɔbɛsɛɛ amanaman no koraa.​—Nyi. 19:11-15.
16. Ebɛn kwan do na nyimpa piinara bedzi owu do konyim?
16 Ɔda edzi kofee dɛ, hɔn a wɔasera hɔn no bedzi owu do konyim. (1 Cor. 15:54-57) Wɔ Har-Magedon kõ a ɔreba no mu no, hɔn a wɔasera hɔn nyina a woenyan hɔn no bɔboa ma woeeyi nsɛmbɔndzi nyina efi asaase do. Christianfo ɔpepem pii a wɔaka no botwa “ahohia kɛse no” na woeenya nkwa akɔ wiadze fofor no mu. (Nyi. 7:14) Hɔn a wobenya nkwa wɔ asaase yi do no dze hɔn enyiwa bohu owu do konyimdzi fofor, ber a woenyan nyimpa ɔpepepem pii a woewuwu no aba nkwa mu no. Hwɛ enyigye ara a dɛm konyimdzi yi dze bɛba! (Andw. 24:15) Na hɔn a wobedzi Jehovah nokwar ekesi ase nyina so bedzi owu a yenyae fii Adam hɔ no do konyim. Afei, wobotum atsena ase afebɔɔ.
17. Aber a 1 Corinthfo 15:58 wɔ hɛn adwen mu no, ebɛnadze na ɔsɛ dɛ yɛyɛ ndɛ?
17 Ɔsɛ dɛ Christiannyi biara a ɔtse ase ndɛ no ma n’enyi sɔ awerɛkyekyensɛm a ɔfa owusoɛr no ho a Paul kyerɛwee kɛmaa Corinthfo no. Yɛwɔ ndzɛmba pa pii a yebotum egyina do dze Paul n’afotu a ɔnye dɛ yɛnyer hɛnho nyɛ dza yebotum biara “wɔ Ewuradze edwuma mu” ndɛ no ayɛ edwuma. (Kenkan 1 Corinthfo 15:58.) Sɛ yefi nokwardzi mu yɛ dza yebotum biara wɔ dɛm edwuma yi mu a, yebotum ahwɛ kwan dɛ daakye yebenya asetsena pa a enyigye wɔ mu. Mbrɛ osi ma dɛm asetsena no bɛyɛ enyigye afa no yerunntum mmfa hɛn adwen mmbu nnwie. Dɛm aber no ɔbɛda edzi dɛ, hɛn berɛ annyɛ gyan wɔ Ewuradze mu.
IBEYI ANO DƐN?
Sɛ yehyia ɔhaw ahorow a, ebɛn kwan do na ɔsɛ dɛ owusoɛr ho enyidado no hyɛ hɛn dzen?
Hɔn a wɔbɛsesa hɔn wɔ ‘enyibu’ mu no, ebɛn edwuma na wɔnye Christ bɛyɛ?
Ebɛnadze ntsi na afotu a ɔwɔ 1 Corinthfo 15:58 no yɛ afotu pa ma hɛn ndɛ?
NDWOM 140 Daa Nkwa No Nye Iyi Ampa!
^ nky. 5 Corinthfo nwoma a odzi kan tsir 15 ne fã a otsĩa ebien no kã owusoɛr no ho nsɛm kɔ ekyir, nkanka owusoɛr a ɔfa Christianfo a wɔasera hɔn no ho. Naaso, dza Paul kyerɛwee no yɛ asɛm a no ho hia nguan fofor no so. Adzesua asɛm yi bɔboa hɛn ma yeehu mbrɛ ɔsɛ dɛ yɛma owusoɛr ho enyidado no ka hɛn asetsena ndɛ. Afei, yebohu mbrɛ dɛm enyidado yi bɔboa hɛn ma yɛdze enyigye aahwɛ daakye kwan.
^ nky. 2 “Nsɛm A Akenkamfo Bisa” a ɔwɔ Ɔweɔn-Aban yi mu no kyerɛkyerɛ asɛm a Paul kãe wɔ 1 Corinthfo 15:29 no mu.
Fa mona Fa mona Wobesi Dɛn Enyan Ewufo?
w20 December nkr. 8-13